"Da Rita": ikhaya leholide phakathi kweLerici ne-5 Lands - I-Airbnb
"Da Rita": ikhaya leholide phakathi kweLerici ne-5 Lands
Pitelli, Liguria, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Rita
. Ukufinyeleleka kalula ukusuka esangweni le-A15 La Spezia, isango le-A12 Sarzana; basondele kakhulu. Ukufinyelela kalula nangesitimela. Amabhasi ayatholakala ukusuka eLa Spezia naseSarzana Railstation kuya ePitelli. Uma uthintana no-Rita, ungavuma ukudluliswa ngemoto. Ipaki yethu yangasese eyodwa iyatholakala, futhi ipaki imahhala kuwo wonke amadolobhana.
E-Pitelli kukhona Indawo yokuphuzela utshwala, iposi, isitolo sikagwayi, ikhemisi, i-pizzeria nesuphamakethe. Isitobhi sebhasi silungile ekhelini elithi "Da Rita".
I-apartament in 50 sqm etholakala esitezi sokuqala ngakwesobunxele sendawo, kukhona amakamelo okulala ayi-1 anethala elincane, ikhishi elihlome ngokuphelele; izindlu zangasese zisezingeni elifanayo kodwa ohlangothini lwakho lwangasese lwesokudla lwesakhiwo.
Sono Rita una donna piena di entusiasmo e fantasia ,ho impostato la vita nel motto sii felice libera e assapora tutto cio che ti circonda cercando sempre la positiva .Ho viaggiato molto ,sola senza saper lingue, zaino a spalla e ,x 2anni e mezzo mi sono messa in gioco all'eta di 60 in cambio lavoro cucinando e cucendo dall' india alle favelas del Peru e nella foresta amazzonica Ho assaporato quanto la condivisione ti arricchisce e ti rende partecipe di tutto ciò che ti circonda , ho imparato a non aver paura di essere quello che sono perché ognuno di noi ha un suo (Website hidden by Airbnb) tu capisci che sei importante con i tuoi difetti è le tue virtù sarai libera.Vorrei convidere l'entusiasmo forse anche esagerato di essere nata e abitare in questo angolo di paradiso anche lui un po difficile ma generoso di bellezze è emozioni .Io se tu vuoi ti farò scoprire i lati nascosti gli odori i gusti e la.generosita di sentimenti che ancora esistono nel mio borgo
Con gioia RITA
Sono Rita una donna piena di entusiasmo e fantasia ,ho impostato la vita nel motto sii felice libera e assapora tutto cio che ti circonda cercando sempre la positiva .Ho viag…
Inombolo yepholisi: "011015"lt_0548
Hlola ezinye izinketho ezise- Pitelli namaphethelo